Pyae Phyo (MMiTD): October 2013
Command Prompt Basics (Ethical Hacking)
Hacking ပိုင်းလေ့လာလိုသူများအတွက် အဓိက CMD Basic များကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်... အားလုံးပဲ တနေ့ကို ၅ကြောင်းလောက်သာ မှတ်သွား၊ ၂၁ရက်ဆို အားလုံးကို အလွတ်ရပီ။ Hacking သမားများအတွက်သာမက Technician များအတွက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်။
107. Windows Explorer - explorer ................................ By Shivam Panchal.
ဘေးမှာရှိတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တစ်ရက်ကို တစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဗျာ။
Posted by မိုး (နည်းပညာများ)
Management ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲတစ်ခုအားဖိတ်ကြားခြင်း (နီးစပ်ရာမျှဝေပေးပါ)
Singapore နိုင်ငံတွင် နာမည်ကြီး University တစ်ခုဖြစ်သော Nanyang Technological University တွင်သင်ကြား ပို့ချနေသည့် EMBA Program အား တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် Singapore နိုင်ငံမှ ပညာရှင် များ မှလာရောက်ဟောပြောမည့်ပွဲအား တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟောပြာပွဲ အားတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အချိန် ၊ နေရာ တို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဟောပြောပွဲ တက်ရောက်ချင်သူများအနေဖြင့် အောက်တွင် Register ပြုလုပ်ပြီးမှတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေး စိတ်လေ့လာလိုပါက Link ကိုနှိပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Register ပြုလုပ်ရန် နှိပ်ပါ Register Now!
အမျိုးအစား: ကြားဖြတ်သတင်း , အသိပေးခြင်း
အမည် = လောကသာရပျို့
ရေးသားသူ = ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်
သမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ လောက သာရပျို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Download ရယူချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thu Ra
အမျိုးအစား: ရသစုံ စာအုပ်များ
Internet Download Manager v6.18 Build5(30.10.13)
နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Internet download manager 6.18 build5လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ IDM ကိုတော့ လူ တိုင်းသိကြမှာ ပါ ။ အခု ကောင်လေးကတော့ မနေ့ကမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး version လေး ပါ။ လို ချင် သူများ အောက်မှာဒေါင်းသွားပါ။ ထုံးစံ အတိုင်း full versionအတွက် တော့ patch ဖိုင်လေး ထည့် ပေးထားပါတယ်။အရင်က IDM ရှိပြီး သုံးနေသူများ update တင်လိုက်လို့ ရပါတယ် update တင်ပေးပြီးရင် patch ဖိုင်လုပ်နည်းအတိုင်းထပ်လုပ်လိုက်ရင်လည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ update ထွက်တိုင်း အဲဒီနည်းတိုင်းလုပ်လို့ ရပါတယ်။ထပ်ပြီးဒေါင်းစရာမလို့ တော့ပါ။
အမျိုးအစား: Internet Download Manager
Windows_8__Launcher v1.9.5 အသစ်လေးပါ..( for Android )
Window 8 ချစ်သူများအတွက် Window8 Launcher အသစ်လေး
အခုတလောမြန်မာ MPT အင်တာနက်လိုင်းကတော်တော်စုတ်နေလို့ပါ..
Posted by Myanmar IT Sky
Android 4.4 Kitkat Theme Apk v2.3
စက်ရုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Android 4.4 Kitkat ပုံစံနဲ့ Theme လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.4 စတိုင်လေးဆိုတော့ တမျိုးတော့ ဆန်းနေပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ Screen Shoot လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Theme လေးကို Nova Launcher. , Apex Launcher. , Go Launcher. , Holo Launcher. , ADW Launcher. , Action Launcher Pro. , Solo Launcher. , စတဲ့ Launcher တွေနဲ့ အခြားသော Launcher များမှာ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android 4.4 Kitkat Theme ကို သုံး မယ်ဆိုရင်တော့ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Android Theme
မိမိ ကွန်ပျူတာက Software တွေကို အလွယ်တကူ Uninstall လုပ်ဖို့ Your Uninstaller
မိမိ Computer မှာ ရှိတဲ့ Software တွေ ၊ Game တွေကို အလွယ်တကူ Uninstall လုပ်ဖို့အတွက် Your Installer ဆိုတဲ့ Software လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလိုမျိုး Control Panel ကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ
အမျိုးအစား: Computer Software
မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် စာအုပ် (မြန်မာလို)
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ကိုညီလင်းဆက်ရေးသားထားတဲ့ မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ မေးလ်ထဲကနေတောင်းဆိုထားတဲ့ အစ်ကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ တောင်းထားတာတော့ကြာပါပြီ။ အခုမှပဲတင်ပေးနိုင်တော့တယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ တစ်ခု တည်ဆောက်ချင် သူများအတွက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့တစ် ခုပြု လုပ် ပုံ ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းရေးသားပေးထား တဲ့အတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့် ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်သမျှပို့စ်များအား Facebook ပေါ်မှဖတ်ချင်လျှင်
ဒီနေရာမှာ Like ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာ
Posted by အိုင်တီသားလေး
Launcher အသစ်လေးပါ.. Lightning Launcher eXtreme ( for Android )
Launcher ချစ်သူများအတွက် Lightning Launcher အသစ်လေး
support for sharing templates through APKs !
andalot of minor improvement and bug fixes
full changelog available on the g+ community page (too big to fit in the 500 characters allowed here ;-)
Netguide Journal Vol (3), Issue (8) (30.10.13)
NetGuite ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(3), Issue (8) ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Credit to - http://www.facebook.com/netguidemyanmar
အင်တာနက်လိုင်းကို 200% လောက်ဆွဲအားပိုကောင်းစေမယ့် - Internet Cyclone v2.18 + Keygen
ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဘဲ အတော်လေးကို လန်းနေပြီဗျာ။ အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားကို 200% လောက်ကို Speed Up လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Window XP , Vista , Window7, 8 အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကလည်းလွယ်ပါတယ်။ မိမိအသုံးပြု နေ တဲ့ Type ကိုရွေးခြယ်ပေးပြီး Optimize ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီး ရင် Restart ချပြီး ပြန်တက်လာတာနဲ့ အင်တာနက် လိုင်းဆွဲအားပိုမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရရခြင်းစမ်းသပ်ပြီးအသုံးပြုနေတုန်းပါဘဲ။ အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Keygen ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ မူရင်းအတိုင်း ဘဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Internet Cyclone - isapowerful, easy-to-use, Internet Speed Booster / Internet Accelerator for Windows 95, 98, ME, NT, 2003, XP, Vista,7and 8 designed to automatically optimize your Windows settings which will boost your Internet connection speed up to 200%. Internet Cyclone is compatible with all modems and high speed LAN, ISDN, CABLE, DSL, T1 or other connections. This software will still be useful to you after upgrading your Internet connection.
Intel 800 or Higher
Microsoft(r) Windows(r) 8, 7, Vista, XP, 2003, 2000, Me, 98, 95
256Mb of Memory or Higher
အမျိုးအစား: Speed Up Internet
TechSpace Journal Vol-2 Issue-31
TechSpace ဂျာနယ် Vol-2 Issue-31 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
တရားတော်များဆိုင်ရာ apk များစုစည်းမှု(Android)
ဒီစုဆောင်းမှုလေးကတော့ ကျွန်တော့်အနှစ်သက်ဆုံးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ဘယ်ဖုန်းပဲ ပြောင်းပြောင်း ဒါလေးတွေ သွားလေရာ ထည့်ထားတတ်ပါတယ်။ ရောက်ရာအရပ်မှာ သွားလေရာမှာ တရားရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်အောင် စုစည်းထားတာလေးပါ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိသေးပေမယ့် စုဆောင်းပေးနိုင်လို့ စုဆောင်းပြီး ပြန်လည် မျှဝေ လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Android ဖုန်းအတွက်ပါ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း များလည်း နှစ်သက်ကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ ဓမ္မဆိုင်ရာ Application များကတော့ ---
ဘေးမှာရှိတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တစ်ရက်ကို တစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးရုံနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဗျာ။
သတိပြု ရန် - Download Button ကိုနှိပ်ရင် ကျွန်တော့် Home Page နဲ့ Download Page နှစ်ခု က Tab နှစ်ခု အနေနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ကျလာပါတယ်။ သေချာလေးစစ်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ
Posted by ayelwin MMitD
Galaxy S4 ရဲ့Camera Features တွေပါတဲ့ A Better Camera
သင့် Android Phone မှာ နဂိုပါတဲ့ Stock Camera ထက်ကောင်းပြီး Feature တွေပိုမိုပါရှိတဲ့ Third-Party Camera Apps တွေများစွာရှိပါတယ်။ A Better Camera ဆိုတဲ့ Camera App အသစ်က Galaxy S4 မှာပါတဲ့ Camera Modes တွေတော်တော်များများပါရှိတာတွေ့ ရပါတယ်။ HDR, Panorama, Group Shot, Sequence Shot စတဲ့အဓိက Mode တွေပါရှိပါတယ်။
A Better Camera ရဲ့ သွင်ပြင်က ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ ပထမဆုံး အသုံးပြုရင် tutorial screen ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ main interface ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Auto-focus , flashlight , camera shooting modes , gallery launcher , အရှေ့နဲ့ အနောက် ကင်မရာ တွေကို ပြောင်းနိုင်တဲ့ button, ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ button စတာတွေကို တွေ့ ရမှာပါ။ အဲဒီ controls button တွေကို စနစ်တကျ စီထာပေးပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ အတွက် ရိုးရိုး ကင်မရာ ကအတိုင်းပဲ shooter button ကိုနှိပ်ပါ။ Mode တွေပြောင်းဖို့ အတွက် S button ကိုနှိပ်ရမှာပါ။
A Better Camera မှာ shooting modes (၁၂) မျိုးလောက်ပါရှိပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက Galaxy S4 ကင်မရာမှာပါတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Burst , Night , Object , Panorama, Self-Timer, HDR , Preshot ,Sequence , Single Shot, Expo , Video and Group Shot စတာတွေပါပါတယ်။ Object mode ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံက မလိုအပ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Dynamic mode ကလည်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိုပ်တွေကို အဆက်မပြတ် ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါတယ်။
Group shot mode ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေစုရိုက်တဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံး ပုံရရှိဖို့ပုံတွေဆက်တိုက်ဖမ်းယူပေးနိုင်ပြီး ပုံအားလုံးကို ပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံး ပုံတစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ Panorama mode ကတော့ portrait mode နဲ့ ပဲရိုက်လို့ ရမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းကိုဒေါင်လိုက်ထောင်ရိုက်ရမှာပါ။ ကင်မရာနဲ့ မဆန့် တဲ့ မြင်ကွင်းကို အပြည့်လိုချင်တဲ့အခါမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းရဲ့ ပထမ အပိုင်းကို အရင်ရိုက်ပါ။ နောက်ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို ထပ်ရိုက်ပြီး ပုံနှစ်ခုကို ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ မြင်ကွင်းကို အပြည့်အ၀ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
Settings ထဲမှာတော့ customize လုပ်နိုင်တဲ့ options တွေအများကြီးရှိပြီး General , Viewfinder Settings ထဲမှာ shooter sound ကို ပိတ်ပေးဖို့ ၊ ပုံအရွယ်အစားကို ပြောင်းဖို့စတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
A Better Camera က သင့် Android Phone မှာပါတဲ့ Stock Camera App ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Features တွေပါရှိတဲ့အတွက် မြည်းစမ်းအသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Credit to ==> http://www.kothuya.com/
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (42) (29.10.13)
၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (42)ကို တင်ပေး
Credit to - http://www.myanmarinternetjournal.com/ij/download
SMS တွေကိုအချိန်နဲ့ပို့မယ် Auto SMS 3.1.0 ( for Android )
App လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်
ရွှေမြန်မာတွေအတွက် Dhamma Pada v1.0 ( for Android )
History Eraser Pro apk
Android သမားတွေအတွက် ဖုန်းရဲ့မလိုအပ်တဲ့မန်မိုရီတွေကိုဆေးချပေးတဲ့ History Eraser Pro ဆော့ဝဲလေးပါ ဖုန်းမန်မိုရီသိသိသာသာပြန်တိုးလာပါမယ် ဖုန်းမှာRunထားတဲ့မန်မိုရီတွေကို
ဆေးချပေးခြင်းပါ ဖုန်းကိုပေါ့ပါးစေပါတယ် ဖုန်းလေးပင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲကောင်လေးထဲဝင်ပြီး
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol(2), Issue (26)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 28 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Android မှာ ဒေါင်းချင်တာအားလုံးဒေါင်းနိုင်မယ့် FVD - Free Video Downloader 4.0.2 APK
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Android User တွေအတွက် Downloader ကတော့ အတော်လေးကိုကောင်းမွန်ပါ တယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Free Video Downloader ဆိုပေမယ့် Video တွေတင်မကပါဘူး။ အခြားသော Zip , Rar , exe , PDF , Video , APK အပြင်အခြားသော File တွေတော်တော်များများကိုဒေါင်း ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အရမ်းကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ Resume Download ရပါတယ်ဗျာ။ ဒေါင်းလုပ် Speed ကလည်းမြန်တယ်ဗျ။ Facebook , Twitter , Youtube ,နဲ့အခြားသောဆိုဒ်များမှ Video တွေကိုလည်း လွယ်ကူစွာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
- TOP 50 Android tools
- Possibiliy to hide the icon and restored it later
● Can I download YouTube or Flash?
● What must I do to restore the icon app?
Simply go to downloadafile and when the app screen appears, press the "Restore Icon" button
● I'veabrowser withabuilt-in video player (like Google Chrome Beta), how can i download videos?
When the player is shown in the browser, press the "Menù button" and then Share, so select FVD. You can see an how-to video here (http://youtu.be/sZOdRr-SY70)
For any problems or suggestions, feel free to contact us at:
pdf, rar, zip, files, video, downloader, helper, movie, download, video downloader, web browser
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Downloader
▼ October ( 212 )
Management ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲတစ်ခုအားဖိတ်ကြားခြင်း ...
Internet Download Manager v6.18 Build5(30.10.13...
Windows_8__Launcher v1.9.5 အသစ်လေးပါ..( for Androi...
မိမိ ကွန်ပျူတာက Software တွေကို အလွယ်တကူ Uninstall...
မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် စာအုပ် (မြန်မာ...
Launcher အသစ်လေးပါ.. Lightning Launcher eXtreme ( ...
အင်တာနက်လိုင်းကို 200% လောက်ဆွဲအားပိုကောင်းစေမယ့် ...
SMS တွေကိုအချိန်နဲ့ပို့မယ် Auto SMS 3.1.0 ( for An...
ရွှေမြန်မာတွေအတွက် Dhamma Pada v1.0 ( for Android )...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 25 (28.10...
Internet Download Manager v6.18 Build4+ Patch (3...
Kingo Android root 1.1.0.1 ဆော့ဝဲ ၊ root နည်းနှင့်...
Animated Photo Frame Widget + v4.7.1 Apk
CorelDraw Graphics Suite X4+ အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
one click pattern unlocker for Android
Samsung Galaxy Note3မော်ဒယ်အားလုံးကို Root ဖောက်...
Oxford World Magic CD-ROM Learing English free do...
Google Earth 7.1 ( for PC )
Kaspersky Internet Security & Anti-Virus 2014
iPad လေးကို ကွန်ပူတာမှာ သုံးကြမယ်
2G, 3G, Wifi, 4G ရဲ့ Internet Speed ကိုမြှင့်တင်နု...
မြန်မာခြင်းလုံးဂိမ်း (for android)
Internet download manager 6.18 build3final upd...
Folder တွေအတွက်စိတ်ချရမဲ့ Folder-Guard ( for PC )
Skype Video Recorder for Skype v1.3.10.21 + Keygen...
Introduction to Windows Registry စာအုပ် (မြန်မာလို...
All In One Messenger - IM+ Pro v6.6.0 Apk
မှတ်တမ်းလေးတွေရေးမှတ်နိုင်မယ့် Handrite Notes Note...
Wedding Dress ( for PC )
Download IOS 7.03
ESET NOD32 Antivirus v7.0.302 (x64) + Activator & ...
Netguide Journal Vol (3), Issue (7) (23.10.13)
မြန်ဆန်တိကျမှုရှိတဲ့ Puffin Web Browser v3.0.10439 ...
Your.Uninstaller.Pro.v7.5..23.10.2013 ( for PC )
Android Application ရေးသားနည်းစာအုပ် (မြန်မာလို)
Internet Journal Vol 14 No 41
Hide App-Hide Application Icon ( for Andorid )
Advanced System Care7Bata free download
Safari မှာ မြန်မာလို ကောင်းကောင်း မြင်ရအောင်လုပ်မယ...
TuneUp Utilities 2014 Full Version + Patch
YouTube Downloader HD v2.9.9.9 Portable
TechSpace Vol2Issue 30
First Eleven Vol14 No21
7 Day Shopping Guide 4-10
Cat Vs Dog v1.0.5 ( for Android )
How to Root Samsung Galaxy Fame GT-S6810 and GT-S6...
FlashLight HD LED အသစ်လေးပါ. ( for Android )
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-25 (21.10.13)
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 24 (21.10...
Web Desiner နဲ့ Developer များအတွက် Adobe Dreamwea...
Android ဖုန်းထဲက နေ Android app တွေ ဖန်းတီးနိုင်မယ...
Google Play မှ download ရယူလိုသော App/Game များကို...
မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Android Tips လေးတေ...
TeamViewer for Remote Control 8.0.1055 for Android...
Text to Speech Maker Full with Saerial Key
Kaspersky Internet Security 2014 Full Version
Dead Effect Apk + Data v1.0.1 [Unlimited Credit] D...
USA Clix မှာ လျင်မြန်စွာ ငွေရှာခြင်း စာအုပ်
Plants vs Zombies™ v6.0.1 Apk (Latest Version)
Ubuntu Kylin 13.10 (Saucy Salamander) Officially R...
Android User တွေအတွက် Player ကောင်းကောင်းလေး - Wav...
MM Auto Trader v1.0 for Android
Adobe Acrobat XI Pro + Crack ( Full Version )
Windows 8.1 Download x86 x64
ကွန်ပြူတာရဲ့ USB အပေါက်တွေကို USB Drive Defender 1...
3D Image Live Wallpaper v2.0.6 build 23 Apk
Huawei All-in-One Bootloader Unlocker v1.0
HTC One ကို Root လုပ်နည်း
Uninstall tool v3.3.2.5312 full version free downl...